Ciidamada Amaanka Gobolka Bari oo degmada Qandala Kasoo qabtey Hub kala duwan(Sawiro). • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Ciidamada Amaanka Gobolka Bari oo degmada Qandala Kasoo qabtey Hub kala duwan(Sawiro).
Ciidamada Amaanka Gobolka Bari oo degmada Qandala Kasoo qabtey Hub kala duwan(Sawiro).
Posted: Abdirizak Shiino - October 19, 2012 Leave a Comment
Ciidamada Amaanka Gobolka bari iyo kuwa badda ee Puntland oo iskaashanaya ayaa soo qabtey hubkala duwan oo laga soo dejiyey meel u dhow xeebta degmada Qandala.
Hubkan lasoo qabtey ayaa isugu jira lidka taangiyada iyo gawaarida Gaashaman,baasuukayaal iyo bambooyin iyo waliba waxyaalaha qarxa oo ku jirey jawaano.
Gudoomiyaha Gobolka bari C/samad Maxamed Gallan ayaa sheegey in xaley ay lasoo xiriireen maamulka degmada Qandala oo u sheegey in ay arkeen hub laga soo dajinayo meel qandala u dhow oo lagu magacaabo khooriga,oo ay doon nooca feber galaaska loo yaqaano oo ay wateen niman ajinabi ah oo aan horey loogu arag deegaanka.
C/samada Gallan ayaa intaasi ku darey in hubkani oo kala duwanaa ay sahashey qabashadiisa kadib markii ay ka shikiyeen dadkii deegaanka oo la xiriirey maamulka degmada Qandala kadibna ay baaritaan sameeyeen maamulka xaley oo ay heleen meeshii hubka lagu aasey.
‘Maamulka Degmada Qandala ayaa nagu soo wargaliyey kadib markii ay ogaadeen meeshii ay doontu dhigtey hubka oo ay ku xabaaleen meel xeebta u dhow ,kadibna ciidanka ilaalada Badda ee Puntland ayaa nagala qeyb qaatey hubka”ayuu yiri Gudoomiyaha Gobolka bari C/samad Maxamed Gallan.
Taliyaha Ciidanka ilaalada Badda Puntland Col C/risaaq diiriye oo isna ka Hadley ayaa sheegey in qabashada hubkan ay qeybtii ugu muhiimsaneyd ay ka qaateen maamulka degmada Qandala kadib markii maamulka degmada qandala uu la soo xiriirey maamulka gobolka.
Si kastaba ha ahaatee doontan wadey hubka oo Yemen ka timi ayeeysan maamulku sheegin meesha loo wadey hubka balse ay sheegeen in ay sameynayaan baaritaano dheeri ah.
Bosaso Puntland .